Gobolka Washington - Kaalmada Dhoofinta
Bogga ugu weyn|Horumarinta Gobolka Washington|Kaalmada Dhoofinta
Caawinta Dhoofinta waxay abuurtaa Fursado Suuqa cusub, Iskaashiyo
Gobolka Washington waa mid ka mid ah xarumaha dhoofinta waaweyn ee dalka, iyadoo dhoofisa in ka badan 60 bilyan oo doolar sanadkii. Wasaaradda Ganacsiga waxay siisaa ganacsiyada koox khibrad ganacsi leh oo bixisa adeegyo kala duwan oo taageero ah, oo ay ku jiraan u doodista, la-talinta, yareynta halista, cilmi baarista suuqa, ergooyinka ganacsiga iyo taageerada bandhigga ganacsiga, Iswaafajinta ganacsiga iyo barnaamijyada caadada ah, dhammaantood loogu talagalay inay ka caawiyaan shirkadaha Washington inay albaabada u furaan ganacsiga dibedda iyo kordhinta iibka.
Sida aan u caawinno ganacsiyada Washington
Kooxda kaalmada dhoofinta ee ka socota Xafiiska Ganacsiga ee Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanku waxay ka caawiyeen ganacsiyada gobolka oo dhan inay ku ballaariyaan ganacsiga ama kordhiyaan dhoofintooda iyo iibkooda dibedda. Afartii sano ee la soo dhaafay, OEDC waxay caawisay 5,296 ganacsiyo yaryar, iyadoo soo saaraysa $ 705.5 milyan oo dheeri ah oo iibin dheeri ah loogu talagalay macaamiisha caalamiga ah.
Adeegyada Our ka mid ah:
U doodista: Haddii ay kugu soo dhacdo jidgooyooyin kasta oo aad dhoofiso, khubaradayada ganacsiga ayaa kaa caawin kara inaad gudbiso muhiimada dhoofinta iyo ganacsiga caalamiga ah waxayna kaa caawinayaan inaad ka gudubto wax kasta oo carqalad ah inta aad ku jirto, sida dhibaatooyinka dukumiintiyada dhoofinta, caadooyinka, saadka, fiisooyinka, iwm.
La tashiga: Waxaan kaa caawin karnaa inaad abuurto qorshe dhoofinta, caddeynta arrimaha sharciga ganacsiga caalamiga ah, inaad hesho turjubaan, oo aan kuu soo bandhigno wakiillada shisheeyaha iyo iibsadayaasha si aad u soo saarto iib cusub oo caalami ah.
Dhoofinta Barnaamijka Foojarka: Shirkadaha u qalma ee ku cusub dhoofinta ama soo galka suuqyada cusub waxay heli karaan $ 10,000 si ay dib ugu dhigto kharashaadka. Foojarrada waxaa qayb ahaan maalgeliyey Barnaamijka Ballaarinta Ganacsiga ee SBA, foojarada waxaa loo isticmaali karaa in lagu khiyaaneeyo bandhigga ganacsiga ama khidmadaha howlaha ganacsiga, duulimaadka, adeegyada turjubaanka iyo tarjumaadda, barnaamijyada tababarka dhoofinta iyo inbadan. Faahfaahinta ka fiiri warqadda STEP.
Yaraynta Khatarta Gelitaanka suuq cusub, xitaa dhoofinta khibrada leh, waxay noqon kartaa mid adag. Xarunteena Caawinta Dhaqaalaha ee Dhoofinta waxay kaa caawin kartaa inaad baarto saaxiibadaada ganacsi iyo macaamiisha si loo hubiyo inay yihiin kuwa uqalma amaahda iyo kala-soocida sarrifka lacagaha iyo shuruudaha bixinta.
Cilmi-baarista Suuqa: Ma dooneysaa inaad ku ballaariso suuq cusub oo leh dhoofinta laakiin aadan hubin inay macno samaynayso iyo in kale? Waxaan kaa caawin karnaa inaad falanqeyso suuqyada si aad u horumariso oo aad u fuliso qorshahaaga dhoofinta kalsooni buuxda.
Ergooyinka Ganacsiga & Bandhigyada Ganacsiga: Ka qayb qaadashada gobolka ay kafaala qaadayso ergooyinka ganacsiga iyo Bandhigyada ganacsiga wuxuu furi karaa albaabada aan la furi karin waligaa hadaad kaligaa tagto. Kooxdayada caawinta dhoofinta ayaa kaa caawin doonta inaad aqoonsato fursadaha saxda ah ee ganacsigaaga oo ay kula shaqeeyaan si loo hubiyo in kaqeybgalkaagu uu la jaan qaado yoolalkaaga ganacsi.
Maalgelinta: Kooxdayadu waxay kaa caawin karaan aqoonsashada ikhtiyaarrada maalgelinta waxayna kugula xiriiri karaan ilaha dhaqaale ee gobolka, federaalka iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Isku aadka Ganacsiga: Looma baahna inaad ku qaadato saacado aan dhammaad lahayn iyo wicitaano taleefan oo aan midho lahayn oo isku dayaya inaad la xiriirto qofka saxda ah ee dhoofintaada. Khubaradayada ganacsiga waxay qabtaan fursado iswaafajin ganacsi oo fara badan, ha ahaato qayb ka mid ah howlaha ganacsiga gobolka ama bandhig ganacsi, horudhac iibsade horay loo codsaday, ama booqasho soo galid ah wafdi ganacsi ama ajnabi ah.
Resources dheeraad ah
Dhis Qorshahayga Dhoofinta
Raadi Deeqo Deyn iyo Deyn
La tasho Khabiirka Ganacsiga
Ku xirnow Kheyraadka
Ma u baahan tahay caawi?
La xiriir kooxda Caawinta Dhoofinta:
Amadine Crabtree, Khabiirka Ganacsiga Caalamiga Aerospace
Phone: (206) 256-6137
Karl Dahlgren, Sayniska Nolosha / Khabiirka Ganacsiga Caalamiga ah ee Caafimaadka Caalamiga ah
Phone: (206) 256-6132
Tammy Deets, Nadiifi Teknolojiyadda, Soo-saarista Sare & Khabiirka Ganacsiga Caalamiga ah ee Badaha
Phone: (206) 256-6154
Julie Monahan, Teknoolajiyada Macluumaadka & Isgaarsiinta ee Khabiirka Ganacsiga Caalamiga ah
Phone: (206) 256-6147
Ma rabtaa inaad nala dhex gasho?
Waxaan had iyo jeer raadineynaa ardayda raba inay nala sameystaan ​​shaqo tababar aan la bixin si aan u helno xirfadaha 'adduunka dhabta ah' ee ganacsiga, horumarka ganacsiga, suuqgeynta iyo horumarinta dhaqaalaha.
Haddii aad xiiseyneyso codsi, booqo bogga codsiga tababarka Wixii macluumaad dheeraad ah.